IWashington State imangalela iApple ngokusetyenziswa kwe 'Apple' kunye 'neMacintosh' | Martech Zone
IWashington State imangalela iApple ngokusetyenziswa kwe 'Apple' kunye 'neMacintosh'
NgoLwesine, Septemba 28, 2006 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndinqwenela ukuba ibiyinyani.
Okanye… Iifama zase-Indiana Pea zimangalela uApple ngokusetyenziswa kwe 'Pod'.
Okanye… UArthur C. Clarke umangalela uApple ngokusetyenziswa kwe 'Pod'. Khumbula, "Ukuvala iiPod Doors, Hal."
Okanye… I-Rock band, i-The Breeders, ibamangalele u-Apple malunga nokusetyenziswa kwegama elithi 'Pod'. Igama lenye yealbham zabo.
Ngakumbi Iipods kwiWikipedia.
Uyandiqhula, Apple? Bonke abathengisi bakho bachitha imini nobusuku bezama ukufumana isigama esinegama lakho kwilwimi yethu yemihla ngemihla kwaye ngoku ikhoyo, ufuna ukusikwa? Ingaba uyadlala ngam? Ndiyathemba kwaye ndithandazela usuku lokuba elinye lamagama am lihambe lodwa kwimveliso endiyenzileyo ndiyithengisile.
Uyazi ukuba unamagqwetha amaninzi xa…
umangalela iinkampani ukuba zamkele imikhankaso yakho yentengiso eyimpumelelo!
Oku kuyintlekisa njengoko uGoogle emangalela iGoogling. Zingaphi izigidi zeedola ozenzayo ngentengiso yomlomo apho abantu basebenzisa elo xesha? Ngoku ufuna ngaphezulu? Sele ihlawulele yona! Abantu abasatsho nokuthi "Khangela iWebhu"… ngu "Ukhe wayenza loo nto kuGoogle?".
Ubusazi ukuba xa u-Google… er… ukhangela iWebhu kwi-Macintosh Apple, imboni yeapile ayiveli? Ndicinga ukuba lixesha lokuba i-Washington State imangalele i-Apple ngomonakalo ongenakulungiswa owenzayo kwishishini le-apile kuba akukho mntu unokufumana ii-Apile zeMacintosh kwi-Intanethi.
Ukusebenza ngokukhawuleza, ndicinga ukuba sonke kufuneka sihambisane neminqweno ka-Apple kwaye silitshintshe ixesha ukuze sizibandakanye nalo I-Zune. Ukusukela namhlanje ukuya phambili, iPodcasting kufuneka ibizwa ngokuba yi "Zuning"!
Ibali elipheleleyo kwisuti ye-Apple ngaphezulu kwe 'Pod'
Douglas Karr Thursday, September 28, 2006 Sunday, October 4, 2015
I-Payraise Calculator I-AJAX Version inyukile!
Sep 28, 2006 kwi-9: 20 AM
Orâ? ¦ Amafama e-Pea ase-Indiana amangalela i-Apple malunga nokusetyenziswa kwe-'Podâ ??.
U-Orâ? ¦ UArthur C. Clarke umangalela iApple ngokusetyenziswa kwe 'Podâ ??. Khumbula, "Ukuvala iiPod Doors, Hal." ???
Orâ? Band Iqela lomculo werock, i-The Breeders, limangalela uApple ngokusetyenziswa kwegama elithi 'Podâ ??. Igama lenye yealbham zabo.
Ndiyathetha, hay, ngokwaneleyo nge-Mac bashing! … Hayi isihogo, nkqu I ngekhe uyixolele iApple ngale nto bayenzayo ngoku. Kwakungenakuphepheka ukuba amandla aya kwintloko yabo kungekudala okanye kamva.
Sep 30, 2006 ngo-9: 46 PM
UThixo umangalela uApple ngokusebenzisa u "Ndi" - uxolo, andinakukwazi ukuxhathisa.